ट्वाइलेटको झ्यालबाट हाम फा’लेर ज्या’न जोगाएँ ( भिडियो हेर्नुस ) – Online Khabar 24
ट्वाइलेटको झ्यालबाट हाम फा’लेर ज्या’न जोगाएँ ( भिडियो हेर्नुस )
May 28, 2021 by admin admin
१४ जेठ, काठमाडौं । बाँकेको कोहलपुर–११ की २२ वर्षीया सदीक्षा गैरेको नर्स बन्ने सपना पूरा भएको दुई वर्ष मात्रै भएको छ । यो अवधिमा नर्सिङ
पेसा अंगालेर उनले धेरै बि रामी’को सेवा गरिसकेकी छिन् । हरप्रयासको बाबजुद केही बिरामीले उनकै अगाडि ज्या’न पनि गु’माएका थिए ।को’रो’ना
महामा’रीको बेलामा पनि अनवरत सेवामा खटिने क्रममा बिहीबार राति एकजना सं’क्रमितले ‘ज्या’न गुमाए । त्यही बिरा’मीको मृ’त्युले उनको जीवनमा
कहिल्यै नमेटिने नमिठो छाप दिएको छ ।
लाख प्रयास गर्दा पनि बिरा’मीलाई जोगाउन नसक्दाको पीडा त छँदैछ त्यसमाथि बिरामीका आफन्तले गरेको व्यवहारले झन् बढी पी’डा दिएको छ ।बिरा’मीको
मृ’ त्युपछि आ’क्रोशित मृ’त’कका आफन्तले डाक्टर र नर्सहरुमाथि हा’तपात गर्न थालेपछि सदीक्षासहित चि’कित्सक र नर्सको टोली ट्वाइलेटभित्र लुकेर बसे।
आ’क्र’मणकारी त्यहाँ पनि जाइ लागेपछि उनीहरुले ट्वाइलेटको झ्यालबाट बाहिर हामफा’लेर ज्या’न जोगाए को’रोना म’हामारीमा आफ्नो ज्या’नको प्रवाह
नगरी बिरामीको सेवामा खटिँदा बि’रामीको आफन्तबाट भएको यो व्यवहारले उनीलाई असह्यै पी’डा दिएको छ । बिहीबार रातिको त्यो त्रा’सदीपूर्ण घ’टनाबारे
उनले यसरी बयान गरिन् :मेरो नाइट डियूटी थियो । बिहीबार राति सात बजे अ’स्पताल पुगिसकेको थिएँ । पीपीई लगायत आवश्यक स्वा’स्थ्य सुरक्षा सामग्री
लगाएर को’भिड वार्डमा छिरें बेड नम्बर १३ मा रहेका बिरा’मी गम्भी’र अवस्थामा थिए । बिरा’मीको स्याचु’रेसन डाउन हुँदै गइरहेको थियो । आश्विनी दिदीले
भे’न्टिलेटर जोड्नु भएकोरहेछ । तर पनि बिरा’मीमा अक्सि’जन मेन्टेन हुन सकिरहेको थिएन ।’कुरुवाले भने मेरो बि’रामीलाई मा र्ने भयो भनिरहनु भएको
थियो । मेरो बिरा मीलाई केही भयो भने कसैलाई छोड्दिन भन्दै ध म्की दिनु भयो ।
जबकी डियूटीमारहेका दुई जना डाक्टर र चार जना नर्स उनकै बि’रामीको उप’चारमा व्यस्त थिए । उनलाई बचाउन प्रयास जारी राखेका थियौं, तर
हामीले बचाउन सकेनौं ।उनको मृ’त्यु पुष्टि गर्नका लागि ईसी जी गर्ने तयारी भइरहेको थियो । त्यही वार्डमा अर्का एकजना बिरा मी पनि ग’म्भीर थिए ।
उनको पनि स्वास्थ्य अवस्था खस्किँदै गइरहेको थियो । हाम्रो टिममा रहेका डाक्टर र नर्सहरु उनलाई हेर्न त्यता जानुभयो । म भने उनको ईसीजी गर्न तयारी गर्दै थिएँ ।
क्याविनको ढोका तो’डफोड गर्न थालेपछि क्याविनभित्रको एट्याच ट्वालेटभित्र हामी सबै पस्यौं । एट्याच ट्वाइलेटको ढोका पनि उनीहरुले तोडफो’ड गर्न लागे ।
त्यसपछि अब त मरि’ने भयो भन्ने लाग्यो । केही सोच्नै सक्ने अवस्था थि’एन । त्यही बेला हामी सबैको ध्यान ट्वाइलेटको झ्यालमा पुग्यो । त्यही झ्याल फो’डेर
हाम फालौं भन्ने कुरा साथीहरुबाट आयो । तर मेरो हातखुट्टा सबै काँ’पीरहेको थियो । म रोइरहेको थिएँ । उनीहरु ढोकामा जोडतो डले हा’निरहेका थिए ।
एक्कासी ६/७ जनाको समूह वार्डमा प्रवेश गरे । उनीहरुले मेरो घाँ’टी अठ्या’उन थाले ।
त्यही बेला बिरा’मीका एकजना कुरुवा दाइ मेरो अगाडि आएर बलतल्ल छुटाउनुभयो । म अत्तालिँदै डा’क्टर भएको ठाउँमा पुगें । उनीहरु लखेट्दै आइरहेका
थिए । बिरा’को उपचा’रमा व्यस्त चिकि’त्सक र नर्सहरुले मलाई उद्धा’र गरेर क्याविनमा लिएर गए । तर पनि त्यो समूहले क्याविनमा तोड’फोड गर्न छाडेन ​।क्याविनको ढोका तो’डफोड गर्न थालेपछि क्याविनभित्रको एट्याच ट्वाले’टभित्र हामी सबै पस्यौं । एट्याच ट्वाइलेटको ढोका पनि उनीहरुले तोडफो’ड गर्न लागे ​। त्यसपछि अब त म’रिने भयो भन्ने लाग्यो । केही सोच्नै सक्ने अवस्था थिएन ।
चारै जना के गर्ने कसो गर्ने भनेर अत्ता’लिरहेका थियौं । त्यही बेला हाम्रो ध्यान ट्वाइलेटको झ्यालमा पुग्यो । त्यही झ्याल फो डेर हाम फालौं भन्ने कुरा स
थीहरुबाट आयो । तर मेरो हातखुट्टा सबै काँ’पीरहेको थियो । म रोइ’रहेको थिएँ । उनीहरु ढोकामा जोडतो ड’ले हानिरहेका थिए । अन्ततः झ्याल फो’डेर हमफा’ल्न तयार भयौं । तर मलाई हाम फाल्ने आँट नै आएन ।डा. चन्द्रप्रकाश साहुले मलाई हाम फा’ल्न फोर्स गरिरहनु भएको थियो । मला
ई छाडेर पनि उहाहरु हाम फाल्न सकिर’हनु भएको थिएन । मलाई डा. साहुले झ्यालमा उचालेर राखिदिनुभयो । उनीहरुको आक्रो’श थप बढ्दै गइरहेको थयो । ढोका नै फो’डेर भित्र पस्न थालेपछि डा. शाहु, नर्सहरु आश्विनी गुरुङ, बन्दना श्रेष्ठसहित हामी हाम फाल्न बा’ध्य भयौं ।रातिको त्यो कहा’ली लाग्दो रत्रा
‘सदीपूर्ण दृश्य मेरो मानस’पटलमा अहिले घुमिरहेको छ । त्यो सम्झिँदा म कसरी एकतला माथिबाट हाम फालें होला भनेर आफैंलाई विश्वास लागिरहेको छैन । तर हामीसँग विकल्प पनि थिएन ।
बाँकि समाचार र हेर्नुहोस् भिडियो-(साै. हिमालय टीभी)
Prev‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ का दर्शकको लागि अायो दुखद खबरः प्रमोद खरेल पछि अर्को जजमा पनि देखियो को’रोना
nextइन्द्रेणीको छत्र शाही काजललाई धोका दिदै अर्कैसंग धुम धामले बिहे गरे पछि ! ( भिडियो हेर्नुस् )